तथ्याङ्कीय प्रकार्य खण्ड दुई
F वितरणको विपरित दाँया ​टेल फर्काउँछ।
FDIST(सङ्ख्या; degrees_freedom_1; degrees_freedom_2)
सङ्ख्या मान हो जुन F वितरणका लागि गणना गर्नु पर्दछ ।
degrees_freedom_1नुमेरेटरमा F वितरणको स्वतन्त्रको डिग्रीहरू हो ।
degrees_freedom_2 डिनोमिनेरेटरमा F वितरणको स्वतन्त्रको डिग्रीहरू हो ।
=FDIST.RT(0.8; 8; 12)ले 0.6143396437 दिन्छ।
FINV(सङ्ख्या; degrees_freedom_1; degrees_freedom_2)
सङ्ख्या सम्भाव्यता मान हो जसमा विपरित F वितरणका लागि गणना गर्नु पर्दछ ।
degrees_freedom_1F वितरणको न्युमेरेटर स्तन्त्र डिग्रीहरूको सङ्ख्या हो ।
degrees_freedom_2 F वितरणको डिनोमिनेटरटरमा स्तन्त्र डिग्रीहरूको सङ्ख्या हो ।
=F.INV.RT(0.5;5;10) ले ०.९३१९३३१६०९ दिन्छ​।
F वितरणको मानहरू गणना गर्दछ ।
=FDIST(0.8;8;12) ले ०.६१ दिन्छ।
F distribution ले बायाँ पुच्छार को मानहरु गणना गर्दछ।
C = ० लेC = १ वितरण घनत्व प्रकार्य गणना गर्दछ ।
=F.DIST(0.8;8;12;0) ले ०.७०९५२८२४९९ दिन्छ।
=F.DIST(0.8;8;12;1)ले ०.३८५६६०३५६३ दिन्छ।
F सम्भाव्य वितरणको विपरित फर्काउँदछ । F परीक्षणहरूका लागि क्रम अनुसार दुई फरक डेटा सेटहरू बीचको सम्बद्ध सेट गर् F वितरण प्रयोग गर्दछ ।.
=FINV(0.5; 5; 10) ०.९३ दिन्छ​।
संचयी F वितरणको विपरित फर्काउँछ। दुई फरक डेटा सेटहरू बीचको सम्बद्ध स्थापित गर्न F वितरण F परीक्षणहरूका लागि प्रयोग हुन्छ​।
=F.INV(0.5;5;10)ले ०.९३१९३३१६०९ दिन्छ​।
xका लागि फिशर् रूपान्तरण फर्काउँदछ । सिर्जना गरिएका प्रकार्यहरू सामान्य वितरणमा बन्द गर्दछ ।
सङ्ख्या रूपान्तण गर्नुपर्ने मान हो ।
=FISHER(0.5) ले ०.५५ दिन्छ।
xका लागि फिशर रूपान्तरणको विपरित फर्काउँदछ । र सिर्जना गरिएका प्रकार्यहरू सामान्य वितरणमा बन्द गर्दछ ।
सङ्ख्यामान हो जसमा झेलेका विपरित रूपान्तरणमा हुन्छ ।
=FISHERINV(0.5) ले ०.४६ दिन्छ।
F परीक्षणको परिणाम फर्काउँदछ ।
Data_1पहिलो रेकर्ड एरे हो ।
Data_2 दोस्रो रेकर्ड एरे हो ।
=FTEST(A1:A30; B1:B12) तिनीहरूको भेरियन्समा दुई डेटा सेटहरू फरक हुन्छने र दुई मध्ये एक गणना गर्दछ जसमा दुवै सेटहरू एउटै जम्मा जनसङ्ख्याबाट सम्भाव्यता फर्काउँदछ।
=F.TEST(A1:A30;B1:B12) तिनीहरूको भेरियन्समा दुई डेटा सेटहरू फरक हुन्छने र सम्भाव्यता फर्काउँदछने दुई मध्ये एक गणना गर्दछ जसमा दुवै सेटहरू एउटै जम्मा जनसङ्ख्याबाट आएका हुन्छन् ।
सङ्ख्या मान हो जुन गामा वितरणका लागि गणना गर्नु पर्दछ ।
गामा वितरणको मानहरू फर्काउँदछ ।
अल्फा गामा वितरणको परामिति अल्फा हो ।
=GAMMADIST(2;1;1;1) ले ०.८६ दिन्छ।
ले गामा वितरणको मान फर्काउँछ।
=GAMMA.DIST(2;1;1;1) ले ०.८६ दिन्छ।
गामा संचिति वितरणको विपरित फर्काउँदछ । यो प्रकार्यले तपाईँंलाई फरक वितरण सहित चलहरू खोज्नका लागि अनुमति दिन्छ ।
सङ्ख्यासम्भाव्यतामान हो जुन विपरित गामा वितरण गणना गर्नु पर्दछ ।
बेटागामा वितरणको परामिति बेटा हो ।
=GAMMAINV(0.8;1;1) ले १.६१ दिन्छ ।
GAMMADIST गामा संचिति वितरणको विपरित फर्काउँदछ । यो प्रकार्यले तपाईँंलाई फरक वितरण सहित चलहरू खोज्नका लागि अनुमति दिन्छ ।
=GAMMA.INV(0.8;1;1) ले १.६१ दिन्छ।
गामा प्रकार्यको प्राकृतिक लघुगणक फर्काउँदछ: G(x).
सङ्ख्या मान हो जुन प्राकृतिक लघुगणकका लागि गामा प्रकार्य गणना गर्नु पर्दछ ।
=GAMMALN(2) ले ० दिन्छ।
गामा प्रकार्य:G(x)को प्राकृतिक लघुगणक फर्काउँदछ ।
=GAMMALN.PRECISE(2)ले ० दिन्छ।
ले मानक सामान्य मानक संचिति वितरण फर्काउँदछ ।
एउटा नमूनाको ज्यामितिय मान फर्काउँदछ.
=GEOMEAN(23;46;69) = ४१.७९ । त्यसकारण यस अनियमित नमूनाको ज्यामितीय अर्थ मान ४१.७९ हुन्छ​।
डेटा सेटको हार्मोनिक मीन फर्काउँदछ ।
=HARMEAN(23;46;69) = 37.64। त्यसकारण यस यादृच्छिक नमूनाको हरात्मक मध्य 37.64 हो।
हाईपरजियोमेट्रिक वितरण फर्काउँदछ ।
X अनियमित नमूना सम्पादित परिणामहरूको सङ्ख्या हो ।
N_sample अनियमित नमूनाको साइज हो ।
सफलताहरू जम्मा जनसङ्ख्यामा परिणामहरूको सम्भाव्य सङ्ख्या हो ।
N_population जम्मा जनसङ्ख्याको साइज हो ।
=HYPGEOMDIST(2;2;90;100) ले 0.81 दिन्छ​। यदि बटर्ड टोस्टहरूको १०० टुक्राहरू मध्ये ९० टुक्रा टेवलबाट भुईमा बटर्ड साइड पहिले छुने गरि खस्छ​ जसमा यदि बर्टड टोस्टको २ टुक्रा टेवलबाट खसाइन्छ​ भने, दुबै बटर्ड साइड पहिले छुने गरि खस्ने सम्भावना ८१% हुन्छ​।
हाईपरजियोमेट्रिक वितरण फर्काउँदछ।
HYPGEOMDIST(X; N_sample;सफलताहरू; N_population)
=HYPGEOM.DIST(2;2;90;100;0) ले 0.8090909091 दिन्छ​। यदि बटर्ड टोस्टहरूको १०० टुक्राहरू मध्ये ९० टुक्रा टेवलबाट भुईमा बटर्ड साइड पहिले छुने गरि खस्छ​ जसमा यदि बर्टड टोस्टको २ टुक्रा टेवलबाट खसाइन्छ​ भने, दुबै बटर्ड साइड पहिले छुने गरि खस्ने सम्भावना ८१% हुन्छ​।
सीमान्तहरूमा डेटाको अल्फा प्रतिशत बिना डेटा डेटाको मीन फर्काउँदछ ।
डेटा नमूनामा डेटाको एरे हो ।
अल्फा सीमान्त डेटाको प्रतिशत हो ।
=TRIMMEAN(A1:A50; 0.1) ले A1: A50 मा मानहरूको5प्रतिशत उच्च मूल्यहरू र5प्रतिशत न्यूनतम मूल्यहरूलाई विचार नगरि संख्याहरूको औसत(मीन) मान गणना गर्छ। प्रतिशत सङ्ख्याहरूले निर्धारण गरिएका औसत(मीन) मानको मात्रमा सान्दर्भित गर्दछ, समान्डहरूको सङ्ख्यामा हुँदैन।
ले मानक वितरण सहित एउटा z परीक्षणको दुई-पृष्ठभाग मानहरू फर्काउँदछ ।
डेटा डेटा को एरे हो ।
सङ्ख्या परीक्षण गर्नुपर्ने मान हो ।
सिग्मा (वैकल्पिक)जम्मा जनसङ्ख्याको स्ट्याण्डर्ड डेभिएसन हो । यदि यो तर्कहरू हराईरहेको हुँदा प्रश्न प्रक्रियामा जाने छ स्ट्याण्डर्ड डेभिएसन । ।
Title is: तथ्याङ्कीय प्रकार्य खण्ड दुई